सशस्त्र बिओपी छेउबाटै केराउ तस्करी हुदै, सशस्त्रका एसपीको जवाफ गैर जिम्मेवारी पुर्ण ! – Mission Khoj
सशस्त्र बिओपी छेउबाटै केराउ तस्करी हुदै, सशस्त्रका एसपीको जवाफ गैर जिम्मेवारी पुर्ण !
प्रकाशित मिति: २०७६, आश्विन १३ गते सोमबार
वीरगञ्ज,१३ असोज । सशस्त्र प्रहरी बल विओपी सिर्सीयाको कार्यालय रहेकै छेउबाट केराउ (मटर) को भारत तर्फ चोरी निकासी भइरहेको भेटिएको छ ।
वीरगञ्जको शिक्षा कार्यालयमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको सिर्सीया विओपी कार्यालयकै छेउमा रहेको पिपलबोट अगाडी रहेको गल्लीको बाटो भएर खुलेयाम रुपमा केराउको भारत तर्फ चोरी निकासी भइरहेको हो ।
सुर्य उदाए संगै साईकलमा राखेर केराउ भारत तर्फ चोरी निकासी भइरहेको यस अनलाइनले प्रमाण फेला पारेको छ । विहान र बेलुकाको समयमा गरी दैनिक सयौको संख्यामा साईकलबाट केराउको भारत तर्फ चोरी निकासी बढेको हो ।
एउटा साईकलमा ३० किल्लो को बोरा बोकेर दैनिक क्युन्टलका क्युन्टल केराउ भारत तर्फ चोरी निकासी भइरहेको हो । यस सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बल विओपी सिर्सीयाका सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक सुरज पौडेल संग बुझदा आफुले यसबारेमा जानकारी नभएको ले बुझने बताउनु भयो ।
विओपी कै छेउबाट खुलेयाम रुपमा केराउ तस्करी हुदा सशस्त्र प्रहरी के हेरेर बसेको छ भनी प्रश्न गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १३ नम्बर गण पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक दिपेन्द्र कुँवरले यो सशस्त्रको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउदै यस बारेमा तपाईले नेपाल प्रहरी र छोटी भन्सारका कर्मचारीलाई बोलाएर किन पक्राउ गर्न लगाउनु भएन भनी उल्टै गैर जिम्मेवार पुर्ण तवरले प्रश्न गरेका थिए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको विओपी कै छेउबाट खुलेयाम केराउ तस्करी हुदा त्यसलाई पक्राउ गरेर कार्यवाही गर्नुको साटो आफनो जिम्मेवारी बाट पञ्छिदै गैर जिम्मेवारी पुर्ण जवाफ दिनु र सशस्त्रको विओपी आसपास छेउछाउमा जस्तो गलत कार्य गरेपनि यो हाम्रो जिम्मेवारी हैन भनी पञ्छिने सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक कुँवरको भनाईले गलत कार्य गर्नेहरुलाई संरक्षण गरेको होकी भनेर शंका गर्ने आधार बनेको छ ।